Madaxweyne Waare oo amar dul-dhigey Golihiisa Wasiirada – Radio Baidoa
Madaxweyne Waare oo amar dul-dhigey Golihiisa Wasiirada
Dhawaan ayaa la filayaa in Xubnaha Golaha Wasiirada Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle inay fadhi ka yeeshaan miisaaniyadda Maamulka Hir-Shabeelle ee sanadka 2020 si ay u ansixiyaan,si loogu gudbiyo Xildhibaannada Maamulkaas.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ku amrey dhamaan Golaha Wasiirada Hir-Shabeelle ee ka maqan Magaalada Jowhar ha ahaan kuwa fasaxa ku maqan iyo kuwo kale inay si deg deg ag dib ugu soo laabtaan.
Afhayeenka Maamulka Hir-Shabeelle daa’uud Xaaji Ciro oo faah faahinayey War kasoo baxay Madaxweyne Waare ayaa sheegay in inta lagu jiro diyaar garoow horkeenida golaha Miisaaniyadda Maamulka Hir-Shabeelle ee sanadka 2020 inay Golaha soo xaadiraan.
Amarkana ayaa Madaxweynaha Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare waxaa uu dul-dhigey Wasiirada xilli shalay Gelinkii dambe uu dib ugu laabtey Jowhar,isaga oo maalmahaan ku sugnaa Magaalada Muqdisho.
Dowladda Somalia oo ka fikireysa Xayiraadda laba dal oo Carona laga helay
Ciidamada Dowladda oo dhaq dhaqaaq ka wada duleedka Janaale